i-GS 20T ibhotile jack | EPONT
Ukususela ngo-2006, i-Epont i-Jack sisixhobo sokugcina izilwanyana zemoto (i-hydraulic jacks, i-injini ye-injini).
Ibhotile yeHydraulic jack
Ezinye izixhobo Eziphakamisayo
I-Introto eqhelekileyo ye-hydraulic jack jack malunga ne-eptunt
Eyona nto ilungileyo ye-hydraulic yelding jack 50t umthengisi
Eyona nto ibalulekileyo ye-hydraulic ibhotile yebhotile ye-jack
Iingcali ze-Hydraulic ye-Hydraulic Black Black Abavelisi
i-GS 20T ibhotile jack
20T yethu jack ibhotile, kumgangatho ophezulu, iimveliso uluphumelele CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono
jack Ibhotile yethu 20T , ngumgangatho ophezulu, iimveliso zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono